ဒီမြှင့်တင်ရေးအကြားတက်ကြွဖြစ်လိမ့်မည် 00:01 နှင့် 23:59 1st, 8ကြိမ်မြောက်, 15ကြိမ်မြောက်, 22ကြိမ်မြောက်, 29နိုဝင်ဘာလကြိမ်မြောက် 2017.
အမြတ်နှင့်အရှုံးသာ (: P&L ကို) အကြား slot ကဂိမ်းအပေါ် 00:01& 23:59 အဆိုပါမြှင့်တင်ရေးကာလအတွင်းပြန်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်အရည်အချင်းဆီသို့ဦးတည်ရေတွက်ပါလိမ့်မယ်.
15% ဆုံးရှုံးမှုပြန်မြှင့်တင်ရေးကာလအတွင်းပိုက်ကွန်အနိုင်ရရှိအနေအထားအရသိရသည်ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မည် (အစစ်အမှန်ပိုက်ဆံအနိုင်ပေးထံမှ) သာအားလုံး slot ကဂိမ်းအပေါ်.
ကစားသမားအရည်အချင်းပြည့်မှီမှပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်း£ 10 နိမ့်ဆုံးအပ်နှံကြရမည်ဖြစ်သည်.
ကစားသမားများကဤမြှင့်တင်ရေးတို့အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီဖို့ဆုံးရှုံးမှုအတွက်£ 10 ကျော်နီးပါးရှိပါသည်ကြရမယ်
နောက်ကျောငွေပမာဏအပိုဆုရန်ပုံငွေအတွက်£ 50 ဖြစ်ပါတယ်အတွင်းထုတ်ယူရမည်ဖြစ်သည်အများဆုံးစုစုပေါင်းရန်ပုံငွေ 72 ဆုကြေးငွေရန်ပုံငွေများ logging နှင့် wagering နေဖြင့်နာရီ.
Blackjack နှင့်ကစားတဲ့အပေါ် Play ပြန်ဆုံးရှုံးမှုမှတွက်ချက်မှုကိုအထောက်အကူပြုမည်မဟုတ်.
ဆုကြေးငွေငွေသားမှပြောင်းပေးနှင့်မဆိုသက်ဆိုင်ရာအနိုင်ရရှိတဲ့ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်မတိုင်မီ 30x ၏အာမခံလိုအပ်ချက်များကိုဆုကြေးငွေပမာဏကိုလျှောက်ထား.
အပိုဆုခရက်ဒစ်ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့်အောက်ပါဂိမ်းအပေါ်အသုံးပြုရနိုင်ရင်: Dracula, သေနတ် '' N ကို’ နှင်းဆီပန်း, လူးစ Hendrix, ဘုရားသခင့ Fortune မဂ္ဂဇင်း, အဆိုပါမမြင်နိုင်သောက Man, လီယိုပတ်ထ MegaJackpot, ဆိုက်ဘေးရီးယားမုန်တိုင်း Megajackpot, Megajackpots ကျွန်း O'Plenty, Wolf က Run ကို Megajackpot, ကြယ်ပွင့်မီးအိမ် Megajackpot, Gong Xi Fa Cai, ပိုများသောမျောက်များကြယ်ထီပေါက်, Genie ထီပေါက်, Winstar, တရားမျှတမှုအဖွဲ့ချုပ်, Batman, က Superman, အဆိုပါ Flash ကို, Green Lantern, Holly Madison နှင့်အတူတစ်ဦးညနေခင်း, Psycho, ဂျိမ်းစ်ဒင်း, အဆိုပါဝက် Wizard ကို, Thunderstruck II ကို, Avalon, ခရီးစဉ်အပေါ် Fortune မဂ္ဂဇင်း၏ဘီး, ချန်ပီယံ Raceways, slot အိုရွှေ, စူပါတိုးတက်မှုနှုန်း, စူပါစိန် Deluxe, worms, ထိပ်တန်းကြောင်, 100K သည်ပိရမစ်, Black ကမုဆိုးမ, မိသားစု Guy, Ghostbusters, hot Rolls စူပါ Times သတင်းစာ Pay ကို, အန္တရာယ်, ကံကောင်း Larry Lobstermania 2, နောဧရဲ့သေတ္တာ, ရှားလော့ဟုမျး: Blackwood များအတွက် Hunt က, အနောက်တိုင်းခေါင်းလောင်း, Fortune မဂ္ဂဇင်း Triple လွန်ကဲလည်၏ဘီး, Fortune မဂ္ဂဇင်း၏ဘီး: ultra5ရက်ကြောင့်မှားယွင်း
တာဝန်သိ Gamble. ပိုပြီးအချက်အလက်ခရီးစဉ် www.gambleaware.org